Aza manome tsiny ny CMS, manome tsiny ny mpamolavola lohahevitra | Martech Zone
Alarobia, Febroary 22, 2012 Sabotsy, Oktobra 24, 2020 Douglas Karr
Androany maraina dia nanana antso tsara tamin'ny mpanjifa mety ho azy ireo aho paikady marketing miditra. Nilaza izy ireo fa hihaona amin'ny orinasa hampivoatra ny tranonkalany izy ireo. Voamariko talohan'ilay antso fa efa eo izy ireo WordPress ary nanontany raha mbola hanohy hampiasa an'io izy ireo. Hoy izy tsia ary nilaza fa mahatsiravina… tsy afaka nanao na inona na inona tamin'ny tranokala tiany izy. Androany izy dia miresaka amin'ny orinasa izay hivoatra amin'ny Expression Engine.
Tsy maintsy nanazava aho fa niara-niasa izahay Engine Expression somary be koa. Niara-niasa tamin'i Joomla koa izahay, Drupal, MarketPath, Imavex ary rafitra rafitra fitantanana atiny hafa. Na dia mila rafitra fikarakarana am-pitiavana sy malefaka aza ny rafi-pitantanana CMS sasany, dia hitanay fa ny ankamaroan'ny rafitra CMS dia namboarina nitovy… ary ny fisarahana ara-pitantanana sy ny fampiasa mora ampiasaina ihany no mampisaraka.
Vonona ny hiloka aho fa ity mpanjifa ity dia afaka manatanteraka izay rehetra tadiaviny ao amin'ny WordPress. Ny olana dia tsy WordPress, fa ny fomba namolavolana ny lohaheviny. Ny mpanjifa iray izay nanomboka niara-niasa tato ho ato dia orinasa VA Loan Refinance. Orinasa lehibe izy ireo - mamerina vola any amin'ireo fikambanana mpanao asa soa an'ny veterana isaky ny manangona referansa izy ireo. Na dia manao customization an'arivony taonina aza izahay, dia agnostika izahay fa ny mpanjifa dia afaka manana tranokala tsara tarehy sy voatsara ary azo ampiasaina amin'ny CMS rehetra araka izay azony atao amin'ny WordPress. Malaza be izao ny WordPress, ka hitantsika fa miasa bebe kokoa amin'io sehatra io ny tenantsika noho ny hafa.
Ny VA Loan dia nividy lohahevitra namboarina ary nanakarama anay hampivelatra ny paikadim-pitadiavana sy ny fiaraha-monina. Loza ny lohahevitra… tsy misy ny fampiasana sidebars, menus na widgets. Ny singa rehetra dia nasiana kaody matevina tao amin'ny maodelin'izy ireo nefa tsy nampiasa ireo fiasa lehibe rehetra noraisin'ny WordPress. Nandany ny roa volana manaraka izahay nanangana ny lohahevitra, nanambatra hery misintona Forms miaraka amin'ny Leads360, ary mamolavola widget izay maka ny tahan'ny findramam-bola farany aseho ao amin'ny tranokalany avy any amin'ny banky.
Ity dia olana iray eo amin'ny rafitra mpamorona lohahevitra sy maso ivoho. Fantatr'izy ireo ny fomba fanaovana ny tranokala ho tsara tarehy, fa tsy ny fomba fampiasana tanteraka ny CMS hampidirina ireo endrika samihafa mety ho tadiavin'ny mpanjifa any aoriana. Nahita an'i Drupal, Expression Engine aho, Fahalalahana Accrisoft, ary ireo tranokala MarketPath izay sady tsara no azo ampiasaina… tsy noho ny CMS, fa satria ilay orinasa namolavola ny lohahevitra dia ampy traikefa mba hampidirana ireo fiasa CMS rehetra izay azo ampiasaina amin'ny fikarohana, sosialy, pejy fandraisana, endrika sns. ilaina.
Ny mpamorona lohahevitra tsara dia afaka mamorona lohahevitra mahafinaritra. Ny mpamorona lohahevitra lehibe dia hamolavola lohahevitra azonao ampiasaina mandritra ny taona maro (ary hifindra mora foana amin'ny ho avy). Aza manome tsiny ny CMS, manome tsiny ny mpamorona lohahevitra!
Tags: CMSrafitra fitantanana atinydrupalendrika misintonaimavexmampihiditra barotrafampidiranaJoomlatsenafoto-kevitrafamolavolana lohahevitraWordPress
Febroary 22, 2012 amin'ny 3:51 PM
Fantsika amin'ny loha. Mamolavola tsara ny 90% amin'ny tetikasanay miaraka amin'ny WordPress izahay ary misy fotoana handrenesanao fanehoan-kevitra tahaka izao sy zavatra toy ny hoe “Eny, tsy afaka __________ izany”. Mazava ho azy fa ny valiny marina dia hoe, "Raha mbola tsy misy zavatra mifanaraka amin'ny filanao (lohahevitra sy/na plugins), ary raha mahay mampiasa ny API ny mpamorona anao, dia afaka manao izay rehetra tianao hatao ianao. raha mbola eo ihany ny fotoana sy ny teti-bola.”
Saingy indraindray ny mpanjifa dia manana ny sainy amin'ny zavatra "vaovao", ka ianao dia mihodinkodina miaraka amin'izany na midina.
23 Feb 2012 tamin'ny 10:08 maraina
Mahaliana izany. Taorian'ny nanombohako niasa tao amin'ny Reusser Design, dia nivadika tamin'ny asa tao anatin'ny EE, CMS safidinay, avy amin'ny WordPress aho, izay niara-niasa tamin'ny ankamaroany fony aho irery. Miombon-kevitra aminao aho amin'ny lohaheviko WP nahatonga ny fiovana rehetra. Zavatra toa ny lohahevitry ny Canvas an'ny WooTheme, ohatra, dia tena tsara niasa tao anatiny, raha misy lohahevitra “premium” sy fanao hafa any izay… mampihomehy.
Raha lazaina izany, tena tiako ny EE ho an'ny fitantanana votoaty amin'ny tranokala, raha toa ka tsy laharam-pahamehana ny “bilaogy”. Tsotra, kanto, ary matanjaka kokoa noho ny WP, hoy aho. Na izany aza, rehefa manoratra na mibilaogy betsaka ao anatin'ny CMS-nao ianao, dia tsy misy maharesy ny traikefan'ny mpampiasa an'ny WP ho an'io mpanoratra io.
Misaotra tamin'ny hafatrao!
Febroary 28, 2012 amin'ny 10:26 PM
@awelfle:disqus Somary kivy aho raha resaka EE, azo antoka fa nosoratana bebe kokoa ho an'ny mpamorona MVC izany. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, azoko fa ny fampandrosoana dia somary sariaka kokoa sy mivelatra ary tsy dia olana loatra. Satria tsy mieritreritra ny tenako ho mpandrindra ara-dalàna aho, dia mirona amin'ny zavatra mora izay tsy mitaky eritreritra be loatra (saingy mety hiteraka fahavoazana bebe kokoa!).
Febroary 28, 2012 amin'ny 4:54 PM
Ity tranonkala ity dia toa dika novaina amin'ny TwentyEleven. Izany ve no mitranga? Na izany na tsy izany, marina ianao; momba ny lohahevitra daholo izany fa tsy ny CMS. Saingy ny WordPress, IMHO, no sehatra tsara indrindra hiarahana miasa amin'izao fotoana izao.
Febroary 28, 2012 amin'ny 6:56 PM
Tsara maso, @jonschr:disqus ! Lohahevitra TwentyEleven nohavaozina be izy io… tena norovitinay! Mbola tsy afaka nanafina ny anaran'ny lohahevitra rehetra izahay. Ary tianay ny manome ny olona tsara ao @Wordpress:disqus ny fiheverana mendrika azy ireo.
Febroary 28, 2012 amin'ny 9:40 PM
Noho ny fahalianana: Tonga teto aho tamin'ny alàlan'ny pejy fidirana HTML mahitsy izay nisintona ity fahana ity. Nahoana raha ampidirina mivantana izy ireo? Izany no iray amin'ireo fisarihana lehibe indrindra amin'ny WordPress ho ahy; môdely pejy samihafa amin'ny ambaratonga rehetra tianao.
Febroary 28, 2012 amin'ny 10:24 PM
Salama @jonschr:disqus – taiza ny pejy fandraisana? Mamoaka rohy mankany amin'ny tranokala toy izany izahay http://www.corporatebloggingtips.com fa te hampifantoka ny fifamoivoizana hiverina amin'ny loharano tokana. Aleoko manana ny fifamoivoizana rehetra eto, manosika ny fahefana amin'ity sehatra ity, ary miantoka izay rohy miverina dia manosika ity sehatra ity miaraka amin'ny milina fikarohana. Enga anie ka izay no tianao ambara! Raha mamoaka amin'ny sehatra maro aho dia zaraiko izany fahefana izany… Aleoko manana tranokala matanjaka 1 toy izay manana tranonkala 2 malemy kokoa.
29 Feb 2012 tamin'ny 12:16 maraina
Eny, izany no izy! Hmm. Misy dikany… Na izany aza, maninona raha atao fotsiny ny “pejy fipetrahana” ho pejy fanondroan'ity tranokala ity? Tsy misy fanafintohinana mihitsy; nanontany tena fotsiny hoe inona no tombony. Tiako ny pejy fandraisana, BTW. Mahafinaritra ery.
29 Feb 2012 tamin'ny 8:46 maraina
@jonschr:disqus tsy misy fanafintohinana mihitsy! Mety ho gaga ianao raha mahatsapa fa tranokala WordPress ihany koa izany. Ary misy taonina ny pejy anatiny izay hita amin'ny milina fikarohana. Tamin'ny fotoana namoahana ilay boky, dia efa mahazatra ny manana tranokalan'ny pejy fipetrahana manokana ho an'ilay boky. Te-hanana sehatra natao ho an'ny "bilaogy orinasa" fotsiny aho ary niasa tsara. Naniry ny hanavao matetika ny votoaty ao amin'ny tranokala aho saingy tsy te-hanoratra bilaogy hafa mihitsy aho – noho izany, ny fisintonana ny fahana, ny fifandraisana ara-tsosialy ary ny fampiasana azy ho kalandrie hetsika dia mitazona azy tsy tapaka. Laharana tsara ho an'ny fe-potoana maromaro izy io ka nahavita ny asany ary manohy ny fivarotana boky ho antsika!